Guddoomiyihii Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashada 2021 oo Muqdisho ku Geeriyooday - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Guddoomiyihii Guddiga xalinta khilaafaadka Doorashada Dadban ee Dalka C/llaahi Abyan Nuur ayaa caawa ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Geerida Guddoomiyaha Guddiga Xalinta khilaafkaad Doorashada ee 2021 ayaa la sheegay inuu u geeriyooday xanuun muddo hayey, isagoo la sheegay inuu ku geeriyooday isbitaalka Martini; waxaana geeridiisa ka tacsiyadeeyay madax badan oo ka tirsan dowladda Federaalka iyo madaxda mucaaradka.
Alle ha u naxariistee Guddoomiyihii Guddiga Xalinta Khilaafaadka ee Heer Federal Cabdullaahi Abyan Nuur ayaa dhowaan noqday Guddoomiyaha Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashada Dadban ee dalka 2021.
Wuxuu hore u soo noqday wasiir ka tirsan dowladii KMG ah, isagoo xilal kala duwan oo xildhibaannimo iyo wasiir kasoo qabtay dowladihii KMG ahaa.
Previous articleMUQDISHO: Meydka Wiil dhalinyaro ah oo habeenkii 4-aad ku jira Qaboojiye iyo Beeshiisa oo War kasoo saartay
Next articleLafta-gareen oo soo saaray Liiska Musharixiinta 3-dii kursi ee ugu danbeysay Aqalka Sare (Akhriso)